Pọdkastị kacha mma nke 2021 ga-ejikọ gị | Nzukọ mkpanaaka
Pọdkastị kacha mma nke 2021 ga-ejikọ gị
Ụlọ Ignatius | 21/11/2021 12:00 | Internet
Ọ bụrụ na ike gwụ gị n'ige egwu mgbe ị na-eje ije, ịtụgharị na pọdkastị ga-abụ ahụmịhe na-abawanye ụba n'ụzọ ọ bụla. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke pọdkastị, ọnụ ọgụgụ nke nwere ike ịba ụba ma ọ bụrụ na ị banyebeghị na ụwa nke pọdkastị ma ọ bụ chọọ ịgbasa ọnụ ọgụgụ pọdkastị ndị ị na-egekarị ntị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe pọdkastị kacha mma, M na-akpọ gị òkù ka ị gaa n'ihu na-agụ akwụkwọ, ebe ị ga-ahụ pọdkastị na isiokwu niile nwere ike ime.
1 Pọdkastị ihe nkiri na ihe onyonyo
1.1 The orbit nke Endor
1.2 Onye Pụrụ Ime Ihe Niile
2 pọdkastị ọchị
2.2 Ọ dịghị onye maara ihe ọ bụla
3 Pọdkastị teknụzụ
3.2 Ozi IPhone
3.3 Ọnụọgụ abụọ
3.4 Kpochapụ X
4 Pọdkastị akụkọ ihe mere eme
5 Pọdkastị ihe omimi
5.1 Narị afọ nke anọ
5.2 Ụbọchị iju
5.3 Sentinel nke Mystery
6 Gee pọdkastị ntị
Pọdkastị ihe nkiri na ihe onyonyo
The orbit nke Endor
Na afọ 12 n'azụ igwe okwu, anyị ahụghị otu n'ime mmemme kacha ochie na Spanish na ụwa nke pọdkastị metụtara ihe nkiri na telivishọn na ebe, na mgbakwunye, ihe nkiri nwekwara ebe.
Na orbit nke Endor, ị ga-ahụ nyocha kachasị agwụ agwụ nke ma ihe nkiri kachasị ọhụrụ na mwepụta TV yana ngwaahịa ndị gosipụtara na nwata nke ọtụtụ. boomers (dị ka ha na-akpọ anyị ugbu a). Dabere na ihe nkiri ma ọ bụ usoro, pọdkastị ahụ nwere ike ịdịru ihe ruru awa 7.
Ọ bụrụ na-amasị gị pọdkastị siri ike nwere nnukwu data metụtara ihe nkiri na telivishọn, pọdkastị a dị mma. Orbit nke Endor dị na iVoox naanị.
Onye Pụrụ Ime Ihe Niile
Onye Pụrụ Ime Ihe Niile bụ pọdkastị kwa ọnwa nke Arturo González-Campos na-eduzi ya na onye isi ihe nkiri Rodrigo Cortés, onye ode akwụkwọ Juan Gómez-Jurado na onye eri nri Javier Cansado (Faemino y Cansado)
Na pọdkastị a, ha na-elekwasị anya n'ikwu okwu banyere ndị nduzi, karịa ihe nkiri a kapịrị ọnụ, ọ bụ ezie na e nwekwara isiokwu nke akụkọ ifo na sinima. Pụrụ ime ihe niile dị na nyiwe pọdkastị niile.
Ọ bụrụ na site na aha, ị na-echeworị na ụmụ okorobịa ndị na-eme Podcast a, maara, dị ka m na mbụ chere tupu na-enye ya a na-agbalị, i mejọrọ nke ukwuu.
Ihe omume ọ bụla nke pọdkastị Planeta Cuñao na-elekwasị anya n'otu isiokwu akọwapụtara, isiokwu nke akụkụ niile nke pọdkastị ahụ na-enyocha nke ọma, nke, n'agbanyeghị, Ha niile sitere na Betis na ha enweghị mmasị na Pablo Motos nke ọma. Ihe omume ndị a na-ewe ihe dịka otu elekere.
Planeta Cuñado dị na nyiwe pọdkastị niile, site na Spotify gaa na Podcast Google gaa na Podcast Apple.
Ọ dịghị onye maara ihe ọ bụla
Ọ bụrụ na-amasị gị ma Andreu Buenafuente na Berto Romero, pocast na-atọ ọchị nke ị na-achọ ka a na-akpọ Ọ dịghị onye Saba Nada, nke ihe omume ọ bụla na-ekwu maka isiokwu ndị na-ege ntị tụrụ aro.
Pọdkastị a dị na nyiwe ahịa niile.
Onye nta akụkọ Alex Barredo na-ebipụta pọdkastị kwa ụbọchị site na Mọnde ruo Fraịde na akụkọ kacha atọ ụtọ gbasara teknụzụ n'ozuzu ya. Ihe omume ndị a na-adị site na nkeji 10 ruo 15 ma dị mma ịmalite ụbọchị ahụ site na akụkọ na-atọ ụtọ nke ị nwere ike ige ntị mgbe ị na-ebupụ nkịta, ị na-aga ịzụta achịcha ...
The Mix.io pocast bụ dị na nyiwe pọdkastị niile.
Dị ka ị nwere ike ịkọ nke ọma site na aha ya, pọdkastị a na-elekwasị anya na Apple, karịsịa na iPhone na iPad. Pọdkastị ahụ bụ kwa izu ma na-agbasa ya ozugbo site na ọwa YouTube Actualidad iPhone.
Pọdkastị Actualidad iPhone dị na nyiwe pọdkastị niile.
Pọdkastị teknụzụ sitere na onye nta akụkọ El Mundo, Ángel Jímenez de Luis, ebe onye ọbịa ọhụrụ na-abịa kwa izu ikwu maka ngwaọrụ ọhụrụ ewepụtara, na-ekwu maka akụkọ kachasị mkpa nke izu…
ọnụọgụ abụọ bụ pọdkastị dị na nyiwe pọdkastị niile.
Ọtụtụ n'ime ụdị nke pọdkastị ọnụọgụ abụọ, na Xataka's Despeja la X, kwa izu, ha na-ekwu maka akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na ụwa teknụzụ ebe ndị editọ Xataka na-esonye.
Kpochapụ X dị na nyiwe pọdkastị niile.
Pọdkastị akụkọ ihe mere eme
HistoCast bụ pọdkastị akụkọ ihe mere eme dị ka nnọkọ ọha na eze na-akọ ihe ndị mere eme ugbu a. Dị ka ha na-ekwu, ha achọghị ikwu okwu n'ihe omume ọ bụla. Ihe karịrị ihe ngosi 200 dị na-eme ka anyị bịarukwuo nso na ihe omume n'akụkọ ihe mere eme na nso nso a.
Ọ bụrụ na-amasị gị akụkọ ihe mere eme, ị kwesịrị ị nwaa pọdkastị a. Pọdkastị HistoCast dị naanị site na iVoox.
Na Podcast akụkọ ihe mere eme Casus Belli ị nwere ike ibi akụkọ agha nke narị afọ nke XNUMX, ebe ị ga-amụta maka agha kachasị mkpa, atụmatụ, ndị mmadụ na ngwa ọgụ. N'ịbụ pọdkastị akụkọ ihe mere eme, ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịhụ ụfọdụ ndị nkwado HistoCast na pọdkastị a,
Mpempe akwụkwọ Casus Belli dị naanị site na iVoox.
Pọdkastị ihe omimi
Ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịhụ ihe ngosi Iker Jímenez, ị nwere ike soro ya site na pọdkastị ọrụ ya, pọdkastị dị na nyiwe pọdkastị niile.
Ọ bụrụ na-amasị gị ihe omimi, ikekwe ị nụla maka Pọdkastị DEX nke Santiago Camacho kwadoro, pọdkastị nke ị ga-eji meju ọchịchọ ịmata ihe gbasara isiokwu ndị kacha dị egwu ugbu a na ruo mgbe ebighị ebi.
Pọdkastị ụbọchị Iche dị naanị na iVoox.
Sentinel nke Mystery
Carlos Bustos na-akpọga anyị n'ime ụwa nke paranormal, nke ọchịchịrị, ebe ihe omimi na oke dị jụụ. Usoro a dị naanị site na iVoox.
Gee pọdkastị ntị
iVoox bụ ikpo okwu Spanish ebe anyị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke pọdkastị pụrụ iche, pọdkastị ndị dị naanị n'elu ikpo okwu a, ma buru akara mbụ.
Ndị ọrụ chọrọ, nwere ike imekọ ihe ọnụ na pọdkastị, atụmatụ dị maka ọtụtụ afọ na iVoox na nke ahụ ka malitere iru Spotify na Apple Podcast.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone, ngwa nke Apple na-eme ka ndị ọrụ niile dị na Apple Podcast, ma ọ bụrụ na ị na-eji gam akporo ị nwere ike iji Google Podcast ngwa (dị ka anyị nwere ike ịhụ, aha mbụ).
Otú ọ dị, ị nwekwara nhọrọ nke iji Spotify ma ọ bụrụ na ị na-ejiworị a n'elu ikpo okwu na-ege ntị ọkacha mmasị gị music, ma ọ bụ ndị ọzọ ngwa dị ka Pocket Casts, ngwa dị maka ma iOS na gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Pọdkastị kacha mma nke 2021 ga-ejikọ gị
Egwuregwu kacha mma maka ụmụaka oke